PetrPikora.com on Juun 10, 2018
Valdstein (Waldstein) waa burbur ku yaalo degmada Semeen ee u dhow Turnov, aagga Bohemian Paradise. Qeybta hoose ee Valdštejn waxay ka timaadaa qaybta labaad ee 13. qarnigii. Waa mid ka mid ah qalcadaha ugu da'da weyn gobolkaas.
Qalabka wuxuu ka dhisay mid ka mid ah laanta qoyska Markvartic sanadihii 1260 ilaa 1280. Waxay u badan tahay in ay ahayd ka Jaroslav Hruštice ama wiilkiisa Zdenek Wallenstein ka dibna noqday joogitaanka qoyskooda, sida laga soo xigtay oo iyaga iyo farcankooda ugu isticmaali sayidyada la saadaalin karo ee Wallenstein ah. Waxay ku qoran yihiin Wallenstein.
Jaroslav ka Hruštice (Hruštice qalcaddayda joogay Turnova) horeysay isticmaalo magaca Jaroslav Lemberka maxaa yeelay, wuxuu ahaa xubin ka mid ah qoyska LEMBERK, ina saddexaad ee Havel of Lemberk. Havel Lemberk wuxuu ka yimid qoyskii Markvartic, oo ku qaatay dhul ballaadhan waqooyiga Bohemia si uu u caawiyo Premyslids. Hooyadii Jaroslav waxay ahayd Zdislava ee Lemberk, oo lagu dabaaldegay 1995.
Wallenstein waxay joogtay 100 sanado badan. Tusaale ahaan., Waan ogahay Zdenek of Wallenstein, Sirkaalkii ka mid ah King of John Luxemburg, Hynek of Wallenstein, kuwaas oo in ka qayb 1336 guutadii military galay Lithuania Czech King iyo John von Wallenstein, kuwa deyman 1500 groschens Margrave Charles, ka dib King Charles IV.
Dhamaadka 14. guri nagaadi qarnigii guuleystay tartanka Vartenberks in sidoo kale iska Markvartic. Iyadoo Henry of Wartenberg go'aansatay in ay degto biilasha hogaamiyaha Hussite Jan Zizka of Trocnov, kuwaas oo 1424 guga askar la imid oo si Turnovo ay, ka guulaystay isaga, beenayn ay keniisad oo ka guulaystay Wallenstein ah. Markaas ayuu u sheegay of Mr. Valečov, saaxiibkiis, kuwaas oo in 1427 xidhay Prince Sigismund Korybutovič, musharax carshiga oo ahayd. In 1431 ahaa taageere kale oo furitaanka Hussites Castle Ramesh ka Stakory (markaas of Hradek).
In sano ee 1438-1439 qalcaddii (iyo degsiimooyinka u dhow Kavčiny) qabtay burcad tuugo oo sidaas daraaddeed labadaba 1440 guulaystay lacag caddaan ah gobolka. Milkiilayaashii dib-u-dejinta ayaa sii waday. Waxay ku noolaa halkan Šofové of Helfenburk tan 1514 Smiřičtí of Smiřic. Qiyaastii sanadka 1550 qalinka wuxuu ku shubay dabka.
Dhamaadka 17. biday qarnigii degay arkaynin Guryohoodii mooyee Václav Holan Rovenský halkan bilaabay oo ay la kulmaan dad sodcaal ah oo kala duwan. The milkiilayaasha guryaha degaanka Wallenstein ah (milkiilayaasha sano ah 1620-1821) oo iyagaan iska daba Aehrenthalové (1821-1945) ka arkaynin Guryohoodii mooyee Xajka ka taataabtay dhisay. In 1713 galay dhagax tallaabooyinka 1722 jiray barxadda dhisay cibaadaysiga ugu horeysay. John of Nepomuk iyo ugu dhakhsaha badan ka dib markii tiro ka mid ah Sidaana of 1817 markaas ahaa St. Chapel. Yooxanaa Baabtiisaha. Year 1836 la dhisay albaab loogu talagalay buundada dhagax, Jaha taxane ah oo farshaxan.
Qoyska Čihulkov waxay lahaayeen makhaayad ku taal qalcadda 1923 ilaa 1949. Kadibna waxaa lagu daray kooxda Sokol. Tan iyo Dagaalkii IIaad ee Dunida, Xarunta Buuraha.
Burburka ayaa la heli karaa lugta calaamadda cagaarka iyo cagaaran, xadiiqadda ugu dhow ee ku dhow waa 1 km fog. Laga soo bilaabo Turnov, ee aagga cadawga ee Mašov oo u dhow Turnov, qalcigu wuxuu ku yaalaa fogaanta 3 km jjv. jihada. Tours waxay suurtagal noqon kartaa bilawga xilliyeed, iyada oo kharashka soo galaya. Burburinta lafteeda waa mitirka 389, dhererka waa mitirka 90. Dabeecadda dabeecadda Hruboskalsko waxay ku taallaa dhinaca koonfureed ee qalcadda.
Hrad se německy nazıval Waldenstein, v českém překladu tedy Dhagax Forest.
Karla Hynka Máchy Karla Hynka Máchy. Qoraaga 1836 rinjiyeynta waa Frantisek Mašek (Maschek, 1790-1862).
Na Valdštejně složil skladatel Josef Bohuslav Foerster oratorium Sv. Václav a Symboni Fifth.
Czech JannadahradValdštejn CastleWallensteinbaaba'ay
Daqiiqado 36 horaantii